त्रिदेशीय कप फुटबलका विजेतलाई सरकारले जनही चार लाख दिने | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more त्रिदेशीय कप फुटबलका विजेतलाई सरकारले जनही चार लाख दिने
काठमाडौं । सरकारले त्रिदेशीय कप फुटबलका विजेता खेलाडीलाई जनही रु. चार लाख दिने भएको छ । आज बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विजेता खेलाडीलाई जनही रु. चार÷चार लाख दिने निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले राससलाई जानकारी दिए ।
नेपाली खेलाडीको हौसला बढाउन प्रधानमन्त्री ओली दशरथ रंगशाला पुगेका थिए । नेपालको तर्फबाट दुवै गोल हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले उठेर ताली बजाउँदै खेलाडीलाई हौसला प्रदान गरेका थिए । अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले पनि विजेता खेलाडीलाई जनही रु. एक लाख पुरस्कार दिने घोषणा गरिसकेको छ ।
चैत २० गते, २०७७ - १४:१४ मा प्रकाशित